Nhau - Mamwe Matipi Nezve WPC
Wood zvigadzirwa zvepurasitiki zvinoumbwa (WPC) zvigadzirwa zvinonakidzwa nezvakanaka zvese zviri zviviri huni uye polymer zvinhu, asi hazvibhadharwe nekukanganisa kwavo.WPC zvinhu zvine simba rakakwirira, zvinodzivirira kuora, mamiriro ekunze kusagadzikana, kutsvedza kuramba.Inogona kushandiswa mukumisikidzwa, gadheni, dzimba. Nemikana yakawanda yakanaka, vanhu vazhinji vanoshandisa WPC zvinhu kushongedza nzvimbo yavo Asi unoziva here matipi eiyo WPC yekugadzira?
1. Vamwe mutengi vari kuda chaizvo kugamuchira yavo yeWPC decking kana vaisa odha.Sega kuva asingashiviriri shamwari yangu inodikanwa, WPC fekitori inoda nguva yekugadzira yako yakawanda WPC decking.Saka usasundidzira fekitori kuburitsa yako WPC mabhodhi nekukurumidza, Kana iyo mbishi ikabuditswa nekumhanyisa, iyo michina maficha eiyo WPC uriri asi hazvireve, zvishoma nezvishoma uye zvirinani mhando.
2. Sekuziva kwedu, zvigadzirwa zvedu zveWPC zvinogadziriswazve zvizere uye zvakatipoteredza.Saka pamwe mumwe mutengi achanetseka nezvehunhu hwehunhu hwedu.Takazvipira kwauri kuti hatizomboshandisa zvinhu zvinodzokororwa.Zvese zvataironga, tichashandisa zvinhu zvitsva uye isu tichaedza izvo zvinhu kana isu tikatenga izvo zvinhu.Sezvakadai, tinogona kuve nechokwadi chehunhu hwakanaka hweedu anoumbwa neWPC decking.
Dambudziko rakajairika rezvigadzirwa zveWPC zviri kupera.Sezvo mamiriro ekunze akakosha, sezuva rakakwirira rinoita kuti zvigadzirwa zvese zvive nyore kurasikirwa nemuvara wavo.Kana nyika yako iine mamiriro akafanana, unofanirwa kutaurira fekitori yedu.Tinogona kuwedzera kuwedzerwa UV kuramba kuwedzera, ichaita kuti mabhodhi eWPC awedzere kuramba kushora.Pasinei nemamiriro ezvinhu, zvigadzirwa zvedu zvinogona kuchengetedza iwo mavara angangoita makore mashanu kusvika kumashanu.Uhu kugona kwakanaka kwazvo.
Saka zvakadiniko nekudyisa kwako nezve yedu inoumbwa WPC decking neyangu tsanangura? Kana iwe usingakwanise kumirira kuti huni hwako hwepurasitiki hwakawanda hwese, kurumidza uye bata nesu!
Post nguva: Jul-06-2021
WPC rinoumba decking, WPC yekunze decking, WPC decking uriri, Kunze WPC decking, huni mapurasitiki ematongerwo decking, WPC uriri,